Waqtigii Kenya u qabatay UNHCR si loo xiro Dhadhaab oo dhamaaday | KEYDMEDIA ONLINE
Waqtigii Kenya u qabatay UNHCR si loo xiro Dhadhaab oo dhamaaday
Waxaa dhamaatay 14-kii maalmood ee Dowladda Kenya u qabatay hay’adda UNHCR inay ku soo gudbiso qorshaha xiritaanka xeryaha qaxotiga.
DHADHAAB, Kenya - Muddo 14 maalin ah oo ay Dowladda Kenya u qabatay hay’adaha qaabilsan qaxootiga ee Qaramada Midoobeey, in ay ku soo gudbiyaan qorshaha xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma ayaa dhamaaday mana jiro qorshe rasmi ah bannaanka la keenay si loo xiro xeryaha qaxootiga.
Kenya oo ka duulaysa cilaaqaadka diblumaasiyadeed ee liita ee kala dhaxeeya Soomaaliya, ayaa marmarsiyo ka dhigatay in xeryahaan ay khatar ku yihiin Amniga, hayeeshee Hay’adda Xuquuqda Aadanaha Amnesty International, ayaa ka hor timid in Dhadhaab iyo Kakuma, lagu xiro hab qilaafsan sharciga caalamiga ah.
Hadalka ka soo baxay xaafiiska Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Kenya Fred Matiangi, ayaa ku soo aaday xilli uu Dowladda Fadaraalka isku soo dhiibay Cabdirashiid Janan, oo horay Soomaaliya ugu eedeysay Kenya inay marti galineyso isla markaana hubeynayso maleeshiyaadka Janan taasoo qeyb ka ah taageerada ay siiso maamulka Jubbaland.
Amnesty International, waxa ay sheegaty in aysan heyn wax caddayn ah oo muujinaya in xerayaha qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakuma ay khatar ku yihiin amniga Kenya, waxayna Madaxda waddanka ugu baaqday in go’aankas ka laabtaan.
Ma aha markii ugu horreysay ee Kenya waqtiga kama dambaysta ah u qabato UNHCR si loo xiro mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ugu weyn adduunka, hayeeshee labada Dowladood, ee Soomaaliya iyo Kenya iyo hay’adda qaxootiga adduunka, ayaa heshiis saddex geesood ah kala saxiixday 2013, kaas oo dhigayay in qaxootigu si iskood ah ugu laabtaan Soomaaliya.
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa marayay meeshii ugu hooseysay sanadihii ugu dambeeyay sababo la xiriira is afgaran waaga muranka ka dhashay badda Soomaaliya ee Kenya damacday in ay boobto.